लद्दाखमा चिनियाँ बिरुद्ध उतारेका गोर्खा सैनिक भारततर्फ सोझिए भने ! « Janaboli
काठमाडौ । भारतिय अधिकारी र बहालवाला सेना प्रमुख खुलेर नै नेपाल चीनको निर्देशनमा चलेको आरोप लगाउँन पछि परेका छैनन् । के उनीहरुलाई थाहा छैन ? भारतको भविष्य नै नेपाली नागरिक (गोर्खा सैनिक) मा छ भन्ने ? तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ भारतीय सेनामा ३९ वटा रेजिमेण्ट छन् । जसमा ७ वटा रेजिमेन्टमा गार्खाली छन् ।
जम्मा १३५ बटालियनमा ३९ बटालियन गोर्खा सैनिक छन् । हालै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका विषयमा भारतीय सेनापति एमएम नरवणेले नेपालबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएपछि उनले ती गोर्खा सैनिकको अपमान गरेको भन्दै भारतमा समेत विरोध भएको थियो। नरवणेले चीनतर्फ इसारा गर्दै नेपालले अरु कसैको आदेशमा सीमा विवाद झिकेको आरोप लगाएका थिए। अझ तपाई धेरै पाठकलाई थाहा भइसकेको छ की अधिकांश गोर्खा सैनिकलाई भारतले भारत–चीन सीमानामा खटाएको छ । ती भारतिय अधिकारीले भुलेका छन् भने यो सन्देश भनिदिन मन लाग्यो की ती गोर्खा सैनिक चीनको सीमाबाट यति त्यसै हो भने आफ्नो जन्मभूमिका खातिर भारततर्फ सोझिए भने उनीहरुको हालत के हुन्छ ?
किनकी भारतले चीनसँग सीमा विवाद बढ्दै जाँदा निरन्तर टसमस भइरहेको लद्दाख क्षेत्रमा गोर्खा सैनिक परिचालित छन् । यदि आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न नेपालले चीनसँग कुम जोड्नु परेको अवस्थामा त्यो दिन नआउँला भन्न सकिन्न । यहाँलाई जानकारी गराउँ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको एक भिडियोमा ‘गोर्खा पल्टन’का सैनिकले नेपाली भाषामा चिनियाँ सैनिकसँग अडान राखिरहेको प्रष्टसँग सुन्न सकिन्छ। उनीहरुले भारतिय सेनामा खटिएपनि नेपाली भाषा नै प्रयोग गरिरहेका छन् । कसरी याद नआउँला की आफ्नी आमाको ? कसरी आद नआउला की आफ्नी जन्मभूमि आमाको । यसैले भारत होसियार हुन जरुरी छ ।
केही दिन अघि सार्वजनिक भएको सो भिडियोमा चिनियाँ सेनाको एउटा गाडी भारतीय सेनाले निणन्त्रण गरेको देखिन्छ। गाडी नियन्त्रण गर्ने क्रममा गोर्खाली सेनाले ‘हान्’, ‘गोद्’ जस्ता नेपाली शब्द प्रयोग गरिरहेको सुनिन्छ। कि भारतिय अधिकारीले यो नेपाली भाषा बुझेनन् । नेपाल भारत जानकार अधिकारीले भारतिय अधिकारीलाई यो भाषा उल्था गरेर सुनाई दिनु पर्यो ।
भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताले भने यो मज्जाले बुझेका छन् । उनले प्रतिक्रिया दिँदै स्वीकारेका छन् की चीनको सीमामा आइपीबीपी (इन्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस) मात्र परिचालन गर्ने नीति छैन । त्यहाँ चिनियाँ सीमामा गोर्खा पल्टन परिचालन गरिएको छ । गोर्खा सैनिक मेहनती सहासी भएका कारण भारतले चुनौतीपूर्ण सीमामा गोर्खा सैनिक नै खटाएको छ । यति मात्र हैन मेहताले लद्दाख क्षेत्रमा गोर्खा पल्टनको मात्र ब्यारेक भएको पनि खुलाए। ‘आवश्यक परेमा गोर्खा पल्टन लद्दाख र कस्मिरमा मात्र होइन, नागाल्यान्ड र पञ्जाबसहित अन्य कुनै पनि सीमामा भारतले परिचालन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘गोर्खा पल्टन भारतको मुख्य लडाकु दस्ता हो।’
गोर्खा पल्टनको पूर्व कमान्डर तथा नेपाल मामिलाका जानकार समेत रहेका मेहताले थपे, ‘चीन र भारतबीच भर्खरै सीमा विवाद भएको लद्दाखको पाङ्गोङ ताल र गलवान घाटी आसपासमा गोर्खा पल्टन परिचालन भएको छ । गएको २६ दिनदेखि लद्दाख क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच टसमस चलिरहेको छ। दुई सेनाबीच अनेकौँ पटक झ ड प भएका छन्। झ ड पका क्रममा चिनियाँ सेनाले कयौँ भारतीय सैनिकलाई नियन्त्रणमा लिएको तस्बिर पनि भाइरल बनेको छ।
तर, भारतीय सेनाले यी तस्बिर र भिडियो आधिकारिक नभएको बताएको छ। यद्यपि भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह दुवैले चीनसँगको सीमामा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न कुटनीतिक र सैन्य पहल भइरहेको बताएका छन्। सैन्य वार्ताका लागि त तयार नै भइसकेको छ । चीनसँग त नाव बढ्दै गएपछि भारतले कस्मिर क्षेत्रबाट कयौँ ट्रक सैनिक, ह तिया र र बन्दोबस्तीको सामान लद्दाख क्षेत्रमा ओसारिरहेको छ।
वैशाखको अन्तिम साता सिक्किमको नाथुला क्षेत्रमा चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच ढुं गा हा ना हा न हुँदा दुवै पक्षका करिब एक दर्जन सेना घाइते भएका थिए। छिमेकी चीन र पाकिस्तानसँग हुने गरेका सैन्य त ना वका बेला भारतले गोर्खा पल्टनलाई ‘फ्रन्ट लाइन’मा परिचालन गर्ने गरेको छ। सन् १९६२ मा गोर्खाली पल्टनले भारतको पक्षबाट चीनसँग ल डाई ल डेको थियो। भुटान र चीनको सीमानजिकै दोक्लममा सन् २०१७ मा चिनियाँ र भारतीय सेना ७३ दिनसम्म आ मनेसा मने हुँदा पनि भारतले गोर्खा पल्टन परिचालन गरेको थियो।
भारतीय सेनामा जम्मा ३९ वटा रेजिमेन्टमा ७ रेजिमेन्ट गोर्खा सैनिककै मात्र छ । जम्मा १३५ बटालियनमा ३९ वटा बटालियन त गोर्खा सैनिक मात्र छन्। हालै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका विषयमा भारतीय सेनापति एमएम नरवणेले नेपालबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएपछि उनले ती गोर्खा सैनिकको अपमान गरेको भन्दै भारतमा समेत विरोध भएको थियो। नरवणेले चीनतर्फ इसारा गर्दै नेपालले अरु कसैको आदेशमा सीमा विवाद झिकेको आरोप लगाएका थिए।
सीमामा झ ड प हुन थालेपछि चीन र भारत दुवैले सैन्य उपस्थिति बढाउन थालेको चिनियाँ र भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। अक्साई–चीन क्षेत्रमा चीन र भारतबीचको विवा दास्पद सीमालाई ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’ (एलसीसी)बाट छुट्टाइएको छ। भारतले ५ अगस्ट २०१९ मा जम्मु–कस्मिर र लद्दाखलाई छुट्टाएर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। सो नक्सामा भारतले आफ्नो भूमिलाई समावेश गरेको भन्दै चीनले विरोध गर्दै आइरहेको छ। यो सन्देश भारतिय अधिकारीसम्म पुग्नेगरी सेयर गरौँ ।